နှလုံးသားရပ်ဝန်းမှ အသံများ...။: April 2009
အခုလို တစ်ကမ္ဘာလုံးက တပ်လှန့်ထားရတဲ့ အခြေအနေ ရောက်နေတဲ့ ၀က်တုပ်ကွေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ စင်ကာပူမှာ ဆေးဝါးများ သိုလှောင်ထားမှု အခြေအနေကို ကြည့်ရအောင်လား။
အကယ်၍ ၀က်တုပ်ကွေး ရောဂါ ကျရောက်လာခဲ့ရင် ကုသရာမှာ အသုံးပြုတဲ့ ဆေးဝါးများဟာ အလုံအလောက် ရှိပါတယ်။ ဆေးရုံများကိုလဲ အရေးပေါ်ဖြစ်လာခဲ့ရင် ချက်ချင်းကုသနိုင်အောင် ကုတင်များကို အသင့်ပြင်ထားပါတယ်။ Tan Tock Seng ဆေးရုံမှာတော့ အဖျားရောဂါနဲ့ ရောက်လာတဲ့ လူနာသည် ကိုယ်အပူချိန် ၃၈ ဒီဂရီ ဆဲလ်စီးယပ်စ်ထက် ကျော်နေမယ်၊ အသက်ရှုလမ်းကြောင်း အခက်အခဲ ဖြစ်နေမယ်၊ ၀က်တုပ်ကွေး ရောဂါ ဖြစ်ပွားရာ တိုင်းပြည်ကနေ ၇ ရက်အတွင်း ခရီးသွားလာဖူးသူ ဖြစ်မယ်ဆိုရင် ချက်ချင်းပဲ စင်ကာပူ ကျန်းမာရေး ဌာနရဲ့ တုပ်ကွေးဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနဲ့ ရောဂါရှာဖွေရေးများကို စမ်းသပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အကယ်၍ ရှွာေ တွေ့ရှိချက်များဟာ သာမာန် တုပ်ကွေးရောဂါ လက္ခဏာနဲ့ တူညီမှု မရှိပါက Genome Sequence နဲ့ လူနာကို စမ်းသပ်ပြီး လူနာကို ချက်ချင်းပဲ CDC လို့ အတိုကောက် ခေါ်တဲ့ Communicable Disease Center မှာ သီးသန့်ထားရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျန်းမာရေး ၀န်ကြီးဌာန၊ ကူးစက်ရောဂါများ ဌာန ဒါရိုက်တာ Dr. Lyn James က ပြောကြားရာမှ “အကယ်၍ ပုံမှန်မဟုတ်သော တုပ်ကွေးလက္ခဏာ ပြသတဲ့ လူနဲ့ တွေ့ခဲ့ရင် ပထမဦးဆုံး သေချာအောင် စမ်းသပ်မှုများ ပြုလုပ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ လက်ရှိ ဆောင်ရွက်နိုင်တာကတော့ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း စမ်းသပ်မှုများသာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီနောက် ရောဂါဖြစ်စဉ်ကို စစ်တမ်းထုတ်ပြီး Swine Flu ဖြစ်စဉ်နဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပြီးမှသာ ၀က်တုပ်ကွေး ဖြစ်နိုင် မဖြစ်နိုင် ကို စစ်ဆေးနိုင်ပါမယ်။”
ကနဦးမှာတော့ ၀က်တုပ်ကွေးရောဂါ ဟုတ်မဟုတ် စစ်ဆေးခြင်းသည် ၇ ရက်ခန့် ကြာမြင့်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခု လက်ရှိ စမ်းသပ်ထားတဲ့ ရောဂါရှာဖွေရေး ကိရိယာ တီထွင်ခြင်းများ အောင်မြင်ပါက ဒီ့ထက်ပို မြန်ဆန်စွာ စစ်ဆေးနိုင်မယ်လို့ ပြောကြားသွားပါတယ်။
သုံးပုံတစ်ပုံသော ၀က်တုပ်ကွေး ရောဂါ ကူးစက်ခံရသူဟာ စစချင်းမှာတော့ ဘယ်ရောဂါလက္ခဏာမှ ပြသခြင်း မရှိတဲ့ အတွက် ရောဂါဖြစ်ပွားရာ တိုင်းပြည်များဆီသို့ သွားလာခဲ့သူ ပြည်သူများအနေနဲ့ ရောဂါအစပျိုးတဲ့ ကာလဖြစ်တဲ့ ပထမ ၇ရက်အတွင်း အများပြည်သူ လူထူထပ်ရာနေရာများသို့ မသွားဖို့ ကျန်းမာရေး ၀န်ကြီးဌာနက တိုက်တွန်းထားပါတယ်။
၂၀၀၃ ခုနှစ်က ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ SARS ရောဂါအတွက် ကုသနိုင်မယ့် ဆေးဝါးများ မရှိခဲ့ပါဘူး။ ယခုအခါမှာတော့ Tamiflu , Relenza အစရှိတဲ့ ဆေးဝါးများဟာ Swine Flu ဖြစ်တယ်လို့ သေချာခဲ့ရင် ၄၈ နာရီအတွင်း ထိရောက်စွာ ကုသနိုင်တဲ့ ဆေးဝါးတွေ ဖြစ်တယ်လို့ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
Tamiflu ဆေးဝါးဟာ ကာကွယ်ဆေး မဟုတ်ဘူးလို့ ဆရာဝန်များက တစ်ညီတစ်ညွှတ်တည်း ပြောကြားထားပါတယ်။ စိုးရိမ်တတ်သူ တစ်ချို့က အဆိုပါ ဆေးဝါးကို ကာကွယ်ဆေးအနေနဲ့ ကြိုတင် သုံးစွဲထားလို့ရှိရင် မိမိရဲ့ ရောဂါ ကာကွယ်ရေး ခုခံအား အပေါ် တစ်နည်း တစ်ဖုံ ထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ ဆရာဝန်များက သတိပေး တားမြစ်ထားပါတယ်။
စင်ကာပူ ကျန်းမာရေး ဌာနက ထုတ်ပြန်ချက်အရ လောလောဆယ် သိုလှောင်ထားတဲ့ ဆေးဝါး ပမာဏကတော့ Tamiflu = 1.15 million course, Relenza = 50,000 Course အသီးသီး ဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။
လက်ရှိဈေးကွက်ထဲမှာ ရောင်းချနေတဲ့ တာမီးဖလူး ဆေးဝါးများသည် Swine Flu ကို ကာကွယ်ရန် လုံလောက်သော အာနိသင် မရှိကြောင်းနဲ့ သုံးစွဲမိပါက ရောဂါပိုးသည် ဆေးယဉ်ပါးမှု ပြဿနာနဲ့ ကြုံတွေ့နိုင်ပြီး ကုသရ ခက်လဲမယ်လို့ သတိပေးထားပါတယ်။
၁၉၁၈ ခုနှစ်က ဒီလို တုပ်ကွေး ဖြစ်ပွားခဲ့ရာမှာ ကမ္ဘာသူ ကမ္ဘာသား သန်း ၅၀ အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ပါတယ်။ အခုလဲ ဒုတိယအကြိမ် တစ်ကျော့ ပြန်လာပါပြီ။ မိမိပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရောဂါလက္ခဏာ ကူးစက်မှု လက္ခဏာများ တွေ့ရှိပါက ပေါ့ပေါ့တန်တန် မနေကြဖို့ ဆရာဝန်များက သတိပေးထားပါတယ်။
ဟောင်ကောင်၊ နယူးဇီလန်၊ သြစတေးလျမှာတော့ တစ်ချို့ တွေဟာ မျက်နှာဖုံးများ Masks များ တပ်ဆင်ကာ သွားလာနေတာ တွေ့ရပါတယ်။
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေး အဖွဲ့အစည်းက အဆိုပါ ၀က်တုပ်ကွေးကူးစက်မှုအတွက် တပ်လှန့်ရာမှာ ယခင် အဆင့် ၄ မှ ယခု အဆင့် ၅ သို့ တိုးမြှင့် တပ်လှန့်ထားပါတယ်။ Swine Flu Outbreak သို့ ရောက်ရန် တစ်ဆင့် သာ လိုပါတော့တယ်။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 9:23 AM4ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
အခု စလုံး အစိုးရက ၀က်တုပ်ကွေးနဲ့ပတ်သက်လို့ စိုးရိမ်ရတဲ့ အဆင့် Yellow Alert အဆင့်အထိ သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။ အစိမ်းကနေ အ၀ါရောင်ပေါ့နော်...။ ကူးစက်ရောဂါ ဖြစ်ပွားတဲ့ လူနာ မရှိသေးပေမယ့် ကာကွယ်ထားတာပါတဲ့။ အိမ်နီးချင်း ထိုင်းနိုင်ငံမှာတော့ မက်ကဆီကိုမှာ ဆယ်မီနာ တက်ပြီး ပြန်လာတဲ့ အမျိုးသမီး တစ်ယောက်ကို တုပ်ကွေး ကူးစက်ခံရတယ် သံသယ ဖြစ်ပြီး သီးသန့်ခန်းထဲ ပြုစုထားပါတယ်...။
နယူးဇီလန်မှာ စပြန့်နေပါပြီ။ သြစတေးလျလဲ ပါနေပါပြီ...။
စင်ကာပူလဲ လူဝင်လူထွက်များတော့ သတိထားနေကြပါ။ အအိပ်မှန် အစားမှန်အောင် လုပ်ကြပါ...။ ကိုယ်ခံအား ကောင်းအောင်နေကြပါလို့...။
သတင်း အကျယ်ကို ဒီမှာ နဲ့ ဒီမှာ သွားဖတ်ကြပါ...။
(SG STD 8:30 pm 290409)
အမေရိကားမှာ ပထမဆုံးသော ၀က်တုပ်ကွေး ကူးစက်ခံရတဲ့ ကလေး အသက်ဆုံးရှုံးသွားပါပြီ။ တက်ဆပ်စ် ပြည်နယ်က အသက် တစ်နှစ်နဲ့ ၁၁လ အရွယ် ကလေးတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ ရောဂါကူးစက်ခံရသူ ၆၄ ယောက် ရှိပါတယ်။ နယူးယောက်က ၄၅ ယောက် အပါအ၀င် ဖြစ်ပါတယ်။ မက္ကဆီကိုမှာတော့ လူပေါင်း ၁၅၉ ယောက်ကို ဇီဝန်ခြွေသွားပါပြီ။ နယူးယောက် မြို့တော်ဝန်ရဲ့ ပြောကြားချက်အရ ရာပေါင်းများစွာသော ကလေးငယ်များဟာ ၀က်တုပ်ကွေးရောဂါ ကူးစက်မှုနဲ့ ဆေးရုံမှာ ကုသမှု ခံယူနေကြပါတယ်။ လက်ရှိ ရောဂါပိုး ကူးစက်မှု ရှိတယ်လို့ တရားဝင် သတင်း ထုတ်ပြန်တဲ့ နိုင်ငံများကတော့
စတဲ့ နိုင်ငံတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အာရှမှာ အကူးစက်နိုင်ဆုံးက နိုင်ငံခြားသား ခရီးသည် အ၀င်အထွက်များတဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ စင်ကာပူနိုင်ငံ ဖြစ်ပါတယ်။
သတင်း အကျယ်ကို ဒီမှာ နဲ့ ဒီမှာ ဖတ်ကြပါ။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 4:32 PM 8 ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 5:40 PM 8 ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 9:59 AM 8 ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
အခု သုံးလေးရက်အတွင်း သီရိလင်္ကာမှာ အစိုးရ စစ်တပ်နဲ့ တမီးလ် ကျားသူပုန်များ အပြင်းအထန် တိုက်ပွဲ ဖြစ်နေတာကို သတင်းမှာ တွေ့ဖြစ်ကြလိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။ စစ်တပ်က သူပုန်တွေကို ဒီတစ်ခါတော့ အချီကြီး ဆော်ဖြစ်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ဖြစ်တဲ့ နေရာက သူပုန်တွေ ထိန်းချူပ်ထားတဲ့ နေရာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုတော့ စစ်ဆင်ရေး အကြီးအကျယ်နဲ့ လုပ်လိုက်တော့ သူပုန်တွေ လဲ ချောင်ပိတ်မိနေပါတယ်။ ချောင်ပိတ်မိရင် ခွေးတောင် ပြန်ခံ ကိုက်တယ်ဆိုတော့ သူပုန်တွေလဲ ရှိသမျှ လက်နက် အင်အားနဲ့ အသေအကျေ ခုခံမယ်ဆိုတာ မလွဲပါဘူး...။
Credit to : Aljazeera
ဒါပေမဲ့ အဲဒီအရပ်မာ နေထိုင်တဲ့ အရပ်သားများဟာ ကြားက မြေဇာပင်တွေ ဖြစ်ပြီး ခုတော့ စစ်ဘေးလွှတ်ရာကို ပြောင်းရွှေ့ ပြေးလွှားနေရတယ်. တီဗွီ သတင်း ကြည့်လိုက်ရင် ပြေးနေသူတွေ လွှားနေသူတွေ တစ်ပုံကြီးပါပဲ။
ဒီနေ့မနက် ရုံးက အလုပ်ကြမ်းသမား သီရိလကာင်္သားတစ်ယောက် မတက်စဖူး အပေါ်ကို တက်လာပါတယ်။ အရင်က အောက်ထပ်မှာ တုန်းက သူနဲ့ နောက်နောက်ပြောင်ပြောင် နေနေကျပါ။ အခု အပေါ်ထပ်ပို ပြောင်းလာတော့ အောက်ထပ်က သူနဲ့ သိပ်မတွေ့ဖြစ်ဘူး။ အိတ်ခ်ျအာနဲ့၊ သူဌေးနဲ့၊ တွေ့ချင်ကြတော့မှ သူတို့တစ်တွေ အပေါ်ထပ်တက်လာတာပါ။
မျက်စိမျက်နှာ မကောင်းလို့ မေးကြည့်တော့မှ အိမ်ပြန်ဖို့ သူဌေးကို ခွင့်လာတောင်းတာတဲ့။ သူတို့ နေတဲ့ အရပ်မှာ စစ်ဖြစ်နေတယ်တဲ့..။ ပြောရင်းနဲ့ ယောကျာ်းကြီးတန်မဲ့ မျက်ရည်တွေ ကျလာလို့ ဘာဖြစ်တာလဲ မေးလိုက်တော့ သူ့ညီငယ်တစ်ယောက် စစ်တိုက်တဲ့အထဲ ရှေ့တန်းပို့တာ ပါသွားတယ်။ မနေ့ညက သေနတ်မှန်လို့ ဆုံးသွားရှာပြီ။ အဲဒါ ပြန်မလို့ ဆိုပြီး ငိုပါလေရော...။
ရင်ထဲ တော်တော် ဆို့သွားတယ်။ ဘာမှ မပြောတတ်တော့ဘူး။ တတ်သလောက် မှတ်သလောက် သူ့ကို နှစ်သိမ့်ပေးလိုက်တယ်။ သူ့ညီအတွက် အလှူငွေ ထည့်မလို့ဟာ အိတ်ထဲမှာ ၅၀ ပဲ ကျန်တော့တာနဲ့ အဲဒီ ၅၀ နဲ့ပဲ ကူလိုက်တယ်...။
စစ်ဆိုတာ ဘာမှ မကောင်းပါဘူး...။
Latest News on Sri Lankar : Click Here and Here.
ရေးသားသူ Ko Boyz at 2:15 PM9ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 5:00 PM3ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 3:00 PM 1 ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 12:47 AM6ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 11:50 AM5ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 10:42 PM5ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
V-1: နေတာ အချိန်တွေ ကြာလာလေ၊ တွယ်တာတာတွေ ပိုလာလေ
အနီးနားက မင်းလေး မြင်အောင် ဖွင့်ပြောဖို့လေ...
V-2: နေတာအချိန်တွေ ကြာလေ၊ (ရင်ခုန်သံမြန်လေ/ ရင်ခုန်ခြင်းများနဲ့)
သိရက်နဲ့ မင်းလေး ဟန်ဆောင် နေဦးမလားလေ
နီးစပ်ခွင့်ပေးပါ (ငယ်သူငယ်ချင်းရေ/ သူငယ်ချင်း ချစ်သူလေး။)
Pre : မကြာခင် ပြန်ဆုံပါရစေ.. တို့ဆုတောင်းရင်းလေ
စိတ်ထဲမှာ မှန်းမျှော် ပြန်ပြီးတွေးနေ
ဘယ်သူ အကြင်နာဆုံးလဲ.. အတိတ် (ကိုလှမ်းကြည့်လှည့်/ပြန်လှည့်ကြည့်ပေး)
အို မြင်နိုင်မယ်ဆို အို လှမ်းလို့ လာခဲ့လေ...။
Cho: ပန်ချင်တဲ့ ပန်းလေးလို ပွင့်လန်းနေ
မပန်ချင်လဲ နှလုံးသားကို ခြွေလိုက်လေ
လာမှာလား မင်း (အတွက်ဆိုရင်လေ/ ကိုတမ်းတနေ)။
Solo. V1, V2, Pre, Cho, Cho
လွန်ခဲ့သော သုံးနှစ်လောက် ထုတ်ခဲ့တဲ့ စုပေါင်းခွေဖြစ်တဲ့ “ဆယ်စက္ကန့်” Vol :1 ထဲက ဇော်ပိုင် ဆိုထားတဲ့ “မင်းအတွက် ဆိုရင်” ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးပါ။ တရုတ်သီချင်းကို စာသား ထည့်ပြီး ပြန်ဆိုထားတာပါ။
မူရင်း တရုတ်သီချင်းထက်တောင် ကောင်းနေသေးတယ်။ အောက်မှာ သီချင်းလေးတွေ တင်ထားပေးပါတယ်။
မူရင်း တရုတ်သီချင်း Nicholas Teo ဆိုထားတာပါ။ မလေးရှားက တရုတ်။ သူ့သီချင်းကို ယူထုမှာလဲ တွေ့တယ်...။
Credit : AsianMaster65
အပေါ်က အမ်ပီသရီး။ အောက်က YouTube တော့ ဇော်ပိုင်ရဲ့ လိုက်ဖ်ရှိုးဗားရှင်း
Credit : BurmeseMTV
ဒါကတော့ ဒီနေ့မှ လောလောလတ်လတ် ကလိထားတဲ့ ဘွိုင်းဗားရှင်း...။ (မျက်နှာပြောင်လိုက်တာ...။)
ရေးသားသူ Ko Boyz at 5:18 PM 15 ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
Created By Publicis Mojo and @RadicalMedia Director: Patrick Hughes
Credit to : Uploader StevenMcDonald
ဘ၀ခရီးကို လက်တွဲဖေါ်မပါပဲ တစ်ကိုယ်တည်း ဖြတ်ကျော်နေရတဲ့ ဘ၀...။
မနက် ၇း၀၀ နာရီ နှိုးစက်အသံကြားရင် ပျင်းကြောဆွဲနေတဲ့ စိတ်ကို ဖြတ်။
အိပ်ရာထ၊ ရုံးသွားဖို့ အ၀တ်လဲ။
နေ့တိုင်း သွားနေကျ လမ်း..
မြင်နေကျ စက်ရုပ်ဆန်တဲ့ လူသားများ...
ငြီးငွေ့ဖွယ် ကောင်းလှတဲ့ လုပ်ငန်းခွင်....။
အိမ်ပြန်လာတော့လဲ ကြိုသူမဲ့ အခန်းလေးက တိတ်ဆိတ် မှောင်မိုက်စွာနဲ့ ကြိုနေလို့...။
ခေါ်သူမဲ့ ဖုန်းလေးမှာ မက်ဆေ့ခ်ျလေးများ ၀င်မလား ဖွင့်မိတော့ ကြော်ငြာမက်ဆေ့ခ်ျတွေပဲ ၀င်လာနေ...။
ဆိုးလိုက်တဲ့ ပျင်းရိဖို့ ကောင်းလိုက်တဲ့ ဘ၀...။
ပျင်းရိဖွယ် ညနေစာကို တစ်ယောက်တည်း စားသောက်ရင်း ဖြတ်သန်းခဲ့တာ ဘယ်လောက် ကြာပြီလဲ...။
အိပ်ခန်းထဲ ရောက်တော့ မီးမှိတ်လိုက်တာနဲ့ ချက်ချင်း အိပ်မပျော်နိုင်...။
ဒီလိုနဲ့ နေ့တစ်နေ့ဟာ စက်ရုပ်ဆန်ဆန် ကုန်သွားတယ်။
လောကီသားပေမို့ တစ်ခါတစ်လေမှာ ယုယကြင်နာချင်တဲ့ ချစ်သူလေး တစ်ယောက်လောက် တောင့်တမိပါရဲ့...။
သို့သော်လဲ ရူပါက ချူချာ၊ မူယာမာယာများလဲ လူတကာလို အမူပါပါ မပြောတတ်လေတော့ ဘယ်မဒီကမှ စိတ်ဝင်စားဟန် မပြ....။
ကံကြမ္မာက မျက်နှာသာ ပေးလာလေသလား...။
လမ်းတစ်ဘက်က တိုက်မှာ မျက်နှာခြင်းဆိုင် အခန်းက အလုပ်လုပ်နေတဲ့ သူလေးကို သတိထားမိတယ်။
သူအလုပ်လုပ်နေတာကို မသိမသာ လူရိပ်လူကဲ ခတ်ပြီးတော့ ချောင်းကြည့်ရတယ်...။
သူလေး မမြင်အောင်၊ သတိမထားမိအောင် ချောင်းကြည့်ရတာ အမော...။
သူလေးကို စမြင်တဲ့ နေ့က စပြီး လောကကြီးက စိုပြေစ ပြုလာတယ်...။
တစ်ရက်မှာ အကြည့်သူခိုးလေးကို လူမိသွားတယ်...။
စာရွက်တစ်ရွက်မှာ စာရေးပြီးတော့ ထောင်ပြတယ်...။
သူတော်တော် ထိတ်လန့်ပြီး ပျာသွားတယ်။
သူလေးက သူဖြစ်ပျက်နေတာကို ကြည့်ပြီး နောက်ထပ် စာရေးထောင်ပြတယ်...။
တော်သေးတယ်...။ ရင်ထဲက အလုံးလေး ကျသွားတယ်...။
နောက်ထပ် စာရွက် ထောင်ပြတယ်။
သူလဲ ကမန်းကတန်း စာရွက်လွတ် တစ်ရွက်ရှာပြီး နာမည်ကို ရေးပေးလိုက်တယ်။
စတေစီ က နောက်ထပ် စာရေးပြတယ်။
ဒီနေ့တော့ ဂျေဆန် အိမ်အပြန်လမ်း တစ်လျှောက်မှာ ကောင်းကင်ကြီးဟာ လှပနေခဲ့တယ်။
စတေစီနဲ့ အဆက်အသွယ်လုပ် ရေးထားတဲ့ စာရွက်လေးကို ရေခဲသေတ္တာမှာ အမှတ်တရ ကပ်ထားမိတယ်။
နောက်တစ်နေ့မနက် နာရီနှိုးစက်သံဟာ ဂျေဆန် နားထဲမှာ သာယာနာပျော်ဖွယ် အတိပေါ့...။
ဒီလိုနဲ့ စာရွက်တွေပေါ်မှာ ပြောချင်တာလေးတွေကို ရေးပြီး အဆက်အသွယ် လုပ်နေခဲ့တယ်...။
နေ့တိုင်း သွားနေကျ လမ်းဟာ ချစ်စရာ ကောင်းနေတယ်
စီးနေကျ ကားဟာ လှပနေတယ်
တက်စီးနေကျ ဓါတ်လှေကားဟာ တင့်တယ်နေတယ်
မြင်နေကျ စက်ရုပ်ဆန်တဲ့ လူသားများဟာ ချစ်စရာ အပြုံးတွေ ကိုယ်စီနဲ့
ငြီးငွေ့ဖွယ် ကောင်းလှတဲ့ လုပ်ငန်းခွင်ဟာ အရင်ကလို မဟုတ်တော့ဘူး...။
စတေစီနဲ့ ဂျေဆန်တို့နှစ်ယောက်ကြား အသံတိတ် စာရေးဆက်သွယ်မှုဟာ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်ကြားကို ရင်းနှီးမှုတွေ တိုးပွားလာစေခဲ့တယ်...။
တစ်တက်တိုး လို့ခေါ်တဲ့ ဂိမ်းတွေကို စာရွက်တွေပေါ်မှာ အပြန်ပြန် အလှန်လှန် တူတူဆော့ခဲ့တယ်...။
စာရွက်ပေါ်မှာ ကာတွန်းမျက်နှာတွေ ဆွဲပြီး ကိုယ့်မျက်နှာပေါ် ထပ်... တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် နောက်ကြ ပြောင်ကြနဲ့ မမြင်ရတဲ့ သံယောဇဉ်တွေဟာ ရစ်ပတ်နေပါပြီ...။
ဒီလိုနဲ့ တစ်ရက်မှာ စတေစီက ဂျေဆန်ကို ထူးဆန်းတဲ့ စာသားတစ်ချို့ ရေးပြခဲ့တယ်...။
“နင့်ကို ဖုံးကွယ်ထားတာ တစ်ခု ပြောစရာရှိတယ်”
“တစ်ကယ်တော့ သူ့ကို တို့ အရင် စောင့်ကြည့်ခဲ့တာပါ”တဲ့...
စတေစီက စာပြလိုက်ပြီး ဂျေဆန်ကို အကဲခတ်နေတယ်...။
ဂျေဆန် ရင်ထဲ ဗြောင်းဆန်သွားတယ်...။ မျက်နှာ အမူအရာလဲ ပြောင်းသွားတယ်.
ဂျေဆန်က စာရွက်တစ်ရွက်ပေါ်မှာ စာသား တစ်ချို့ ကမန်းကတန်းရေးလိုက်တယ်...။
စတေစီက ဂျေဆန် ဘာရေးမလဲ ဆိုတာ စောင့်ကြည့်နေတုန်း...။
ရေးပြီးလို့ စတေစီကို ပြသင့် မပြသင့် ချီတုံ ချတုံ ဖြစ်နေချိန်မှာ...။
စတေစီကလဲ သူဘာရေးပြမလဲ ဆိုတာ ငံ့လင့်နေချိန်...။
အခန်းထဲကို လူတစ်ယောက် လာခေါ်လို့ စတေစီ ထွက်သွားတယ်။
ဂျေဆန် စတေ့စီကို သူရေးထားတဲ့ စာ ပြခွင့် မရလိုက်ဘူး...။
ဂျေဆန်တစ်ယောက် စတေစီကို ရေးထားတာလေး ပြဖို့ ရုံးအိမ်သာထဲက မှန်ရှေ့မှာ အခေါက်ခေါက် အခါခါ အမူအရာတွေ လေ့ကျင့်နေခဲ့တယ်...။
သူ့စိတ်ထဲမှာတော့ ကောင်မလေး တစ်ယောက်ကို ချစ်ခွင့်ပန်တော့မယ့်၊ တစ်ခါမှ အတွေ့အကြုံ မရှိဖူးတဲ့ ဆယ်ကျော်သက် အရွယ်လိုပဲ ရင်ခုန် စိတ်လှုပ်ရှားနေခဲ့တယ်...။
ဒါပေမဲ့ အဲဒီနေ့ တစ်နေ့လုံး စတေစီ သူ့နေရာကို ပြန်မလာခဲ့ဘူး...။
နောက်နေ့ မနက်မှာ အိပ်ရာက နိုးတော့ ဂျေဆန်တစ်ယောက် အတော့်ကို စိတ်လှုပ်ရှားနေခဲ့တယ်...။
ဖြတ်နေကျ လမ်းက ခါတိုင်းထက် ပိုရှည်လာသလိုလို...
စီးနေကျ ကားက ပိုနှေးနေသလိုလို...
စီးနေကျ ဓါတ်လှေကားက ဒီနေ့မှပဲ အချိန်ပိုကြာနေသလိုလို...
မစောင့်နိုင်တာနဲ့ ရိုးရိုးဓါတ်လှေကားကနေ အလုပ်ရုံးခန်းကို လာခဲ့တယ်...။
ရောက်ရောက်ချင်းပဲ လက်ထဲက အသင့်ဆောင်ထားတဲ့၊ မနေ့က ရေးထားတဲ့ စာရွက်လေးကို ကိုင်ကာ စတေစီ့ ရုံးခန်းဘက် လှည့်လိုက်တဲ့ အခိုက်မှာတော့...
စတေစီ့စားပွဲမှာ လူသစ် ရောက်နေတယ်.....
သူ စတေစီကို တွေ့ချင်တဲ့ အကြောင်း စာတွေ စီလာခဲ့တာ ရင်နဲ့ မဆန့်လောက်အောင်ပဲ...
ကံကြမ္မာက သူ့ဘက် အလေး မသာခဲ့ပါလား...
သူ တစ်ချက်လောက် နောက်ကျတာနဲ့ ....
အခုမှ ဇာတ်လမ်းက အရှိန်မြင့်တုန်း..... ကျန်တာကို ဗွီဒီယိုမှာပဲ ဆက်ကြည့်လိုက်ပါလေ...။
အသံတိတ် သရုပ်ဆောင်ထားတာတွေ တော်တော် ကောင်းပါတယ်...။
ဒါရိုက်တာရဲ့ အတွေး အိုင်ဒီယာ ဆန်းသစ်တာလေး သဘောကျမိတယ်။
ထုတ်လုပ်မှု ကုန်ကျစရိတ် လောက်လောက်လားလား မရှိပါပဲနဲ့ ရိုက်ထားတဲ့ ကားလေးပါ။
အဲ... မေ့သွားလို့...။ ရုပ်ရှင်နာမည်က Sign တဲ့...။ ၁၂ မိနစ်စာ ပဲ ရိုက်ထားတဲ့ ကားတိုလေးပါ။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 1:06 AM 20 ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
မိုးတွေ အုံ့တဲ့ နေ့တစ်နေ့
ထုံးစံအတိုင်း ကားတွေက ကျပ်
အိုင်းကာချယ် မပြယ်သေးတဲ့ မျက်နှာ
ရေးသားသူ Ko Boyz at 10:44 AM7ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
ဘလော့ဂ်မင်းသမီးကြီး တွေ့ဖို့ အလွန်ခက်သည်။
ကောမန့်ဘောက်က်မှာ လိုက်ရှာလဲ တို့မတွေ့ပြီ။
အရင်က ဘယ်ဘလော့မှာလဲ မသိဘူး။ ဒီလိုဆန်ဆန် ဖျက်ထားတာ ဖတ်ဖူးပါတယ်။ အိုင်ဒီယာ ကြိုက်တာနဲ့ ပြန်တင်မလို့ လုပ်တာ။ မမှတ်မိတော့ ကိုယ့်ဗားရှင်းနဲ့ကိုယ် ပြန်တင်လိုက်ပါတယ်။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 9:52 PM 28 ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 12:55 AM7ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
စင်ကာပူတွင် လတ်တလော ဖြစ်ပွားနေသော ကာလ၀မ်းရောဂါပိုး Update 1
အခုလတ်တလော ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ စင်ကာပူနိုင်ငံ ဂေးလန်းအရပ်က အိန္ဒိယ စားသောက်ဆိုင်တစ်ခုက Rojak အစာ အဆိပ်သင့်မှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ စင်ကာပူ ကျန်းမာရေး ၀န်ကြီးဌာနမှ ကြေငြာချက်တစ်ရပ် ကို အတည်ပြု ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ကနဦး စုံစမ်း တွေ့ရှိချက်များအရ လူနာဖြစ်စဉ် ၂ ခုမှာ ကာလ၀မ်းရောဂါကို ဖြစ်ပွားစေတဲ့ ပိုးတစ်မျိုးကို တွေ့ရပါတယ်။ အဆိုပါ ကာလ၀မ်းရောဂါပိုးဟာ Vibrio Parahaemolyticus လို့ ခေါ်ပါတယ်။
အဆိုပါ ပိုးဟာ အဏုကြည့် မှန်ဘီလူးနဲ့ ကြည့်ရင် အောက်ကပုံအတိုင်း ပြောင်းရှည်သဏ္ဍာန် တွေ့ရပါတယ်။ ဆားငန်ရည်ကဲ့သို့ ဂုဏ်သတ္ထိရှိသော အရည် (ဥပမာ - ပင်လယ်ရေ) များထဲမှာ ပေါက်ဖွားနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါ ရောဂါပိုး ကူးစက်မိရင် ၀မ်းဗိုက်ပိုင်းဆိုင်ရာ နာကျင်ကိုက်ခဲမှုကို ခံစားရပါမယ်။
ကူးစက်နိုင်တဲ့ လမ်းကြောင်းကတော့ မသန့်တဲ့ အစာများ၊ သားစိမ်းငါးစိမ်း ပင်လယ်စာ (ဥပမာ - မချက်ရသေးသော ပင်လယ်စာ အစိမ်းများ၊ ဆူရှီ စသည်များ၊ ကမာကောင်များ) စားသုံးခြင်း၊ ဒဏ်ရာ အနာတရ ဖြစ်ပွားသော နေရာမှ ရောဂါပိုးများ ၀င်ရောက်ခြင်း (ဖြစ်နိုင်ခြေ နည်းပါး)၊ စသည်တို့ ဖြစ်ပါတယ်။
Vibrio Parahaemolyticus ရောဂါပိုး ကို အဏုကြည့် မှန်ပြောင်းနဲ့ မြင်ရစဉ်။
(Photo Credit to : Wikipedia)
ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်း တစ်ဝိုက်မှာ ရေရဲ့ အပူချိန် မြင့်မားတဲ့ နွေရာသီနဲ့ မိုးဦးကျ ရာသီတို့ဟာ အဆိုပါ ပိုးများ ပေါက်ဖွားဖို့ လွယ်ကူတဲ့ အတွက် အဲဒီဒေသတွေမှာ အဲဒီအချိန်တွေမှာ ကာလ၀မ်းရောဂါပိုးများ ဖြစ်နိုင်ချေ များပြားပါတယ်။ အဓိက ကူးစက်တတ်တဲ့ ပင်လယ်စာများကတော့ ပြည်ကြီးငါး၊ Mackerel ငါးများ၊ တူနာငါး၊ ဆာဒင်းငါး၊ ဂဏန်းနဲ့ ပုဇွန် အစရှိတာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
ရောဂါကူးစက်လာရင် ဖြစ်ပွားတတ်တဲ့ လက္ခဏာများကတော့ ၀မ်းသွားခြင်း၊ ကိုယ်တွင်း ရေဓါတ် ခန်းခြောက်ခြင်း၊ အော့အန်ခြင်း၊ အဖျားကြီးခြင်း စတာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အထက်လှန် အောက်လျှော ဖြစ်တာနဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်ပါပဲ။ ရောဂါလက္ခဏာများ ပေါ်ပေါက်လာရင် ပေါ့ပေါ့ဆဆ မနေကြဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ နီးရာ ဆေးခန်း ပြကြပါ။
အဆိုပါပိုးဟာ မိမိကိုယ်မှာ ရရှိထားတဲ့ ဒဏ်ရာများ၊ အနာများကနေတစ်ဆင့်လဲ ကူးစက်နိုင်တဲ့ အတွက် ပင်လယ်နားနီး နေထိုင်သူများ၊ ရောဂါပိုး ကူးစက်ရာ နေရာ ဒေသတစ်ဝိုက် နေထိုင်သူများဟာ ရေကူးခြင်း၊ အလုပ်လုပ်ခြင်းများ ကို သတိပြု လုပ်ဆောင်ကြရပါမယ်။ အမေရိကားမှာ လွန်ခဲ့သော နှစ်က ကက်သရင်း အမည်ရှိတဲ့ ဟာရီကိန်း မုန်တိုင်း တိုက်ခတ်ပြီးစမှာ အဆိုပါ ဒဏ်ရာကနေ ၀မ်းကိုက် ရောဂါကူးစက်သူ ၂၂ ယောက်ထဲက ၃ ယောက် အဖိတ်အစင် ရှိခဲ့တာမို့ ပေါ့ဆခြင်း မပြုပဲ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း လိုက်နာကျင့်သုံးကြဖို့ တိုက်တွန်းပါတယ်။
(စာအရေးအသား၊ ဘာသာပြန်ညံ့ဖျင်းပါတယ်။ ပေးချင်တဲ့ မက်ဆေ့ခ်ျကို သဘောမပေါက်ရင်တော့ အောက်က ၀ီကီပီဒီးယား လင့်ခ်မှာ ဖတ်ပေးပါ။)
အဆိုပါ ရောဂါပိုးအကြောင်းကို အကျယ် သိလိုပါက ဒီက Wikipedia မှာ သွားဖတ်နိုင်ပါတယ်။
(စင်ကာပူမှာ ဒီရောဂါ စဖြစ်ပြီး ပထမဦးဆုံး လူနာ ဆုံးပါးသွားတဲ့ တနင်္လာနေ့မှာပဲ တစ်ချို့သော Food Court, Hawker Center တွေကို ချက်ချင်း Temporary ပိတ်လိုက်ပြီး သန့်ရှင်းရေးတွေကို အပူတပြင်း လုပ်နေတာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ ပြည်သူများကိုလဲ အချိန်နဲ့ တစ်ပြေးညီ update သတင်းများကို ထုတ်ပြန်ပေးပါတယ်။)
Singpore နိုင်ငံရဲ့ လတ်တလော Breaking News, Updates များကို Channel News Asia ၀ဘ်က်ဆိုက်ဒ်ကနေ တင်ပေးနေပါတယ်။ ၀င်ရောက် ဖတ်ရှုလိုသူများ အောက်က လင့်ခ်မှာ သွားရောက် ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
**Update*** : (စင်ကာပူ စံတော်ချိန် - နေ့လည် ၁၂း၀၀ နာရီ)
အခုလောလောဆယ်တော့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ဒီကနေ့ မနက် ၁၀ နာရီမှာပဲ ၀မ်းရောဂါပိုးကြောင့် အသက်59 နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီး တစ်ဦး ဆုံးပါးသွားပြန်ပါပြီ။ အစာအဆိပ်သင့်မှုနဲ့ စနေနေ့မှာ ဆေးရုံ တင်ထားတာပါ။ ၀မ်းရောဂါကြောင့် အသက်ဆုံးပါးသွားတဲ့ ဒုတိယမြောက် လူနာဖြစ်ပါတယ်။ သတင်းကို ဒီက ရပါတယ်။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 9:29 AM 18 ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
ဧပြီလ ၆ ရက် တနင်္လာနေ့။
အီတလီမှာ မနက်တုန်းက မြေငလျင်လှုပ်သွားတာ အနည်းဆုံး ၂၇ ယောက် အသက်ဆုံးရှုံးတယ်လို့ သိရတယ်။ အင်ဒိုနီးရှားမြောက်ပိုင်းမှာ မြေငလျင် လှုပ်တာ ညဦးပိုင်းက ဆိုပေမယ့် ဒဏ်ရာရသတင်းတွေ မသိရသေးလို့ ဆိုပါတယ်။
အိုဘားမားတစ်ယောက် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ သမ္မတ အဖြစ် ရာထူးခံယူပြီးနောက်ပိုင်း ယခုအခါ နိုင်ငံရပ်ခြားတိုင်းပြည်များသို့ ပထမဆုံး အကြိမ် အဖြစ် ခရီးလှည့်လည် သွားလာနေပါတယ်။ G20 ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲကိုလဲ တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။
နယူးယောက်မှာ ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်က ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ လ၀က ရုံးတွင်း ပစ်ခတ်မှုမှာ သေနတ်သမားဟာ ၀န်ထမ်များ အပါအ၀င် နိုင်ငံသား ခံယူဖို့ စောင့်ဆိုင်းနေသူ ၁၂ ယောက်ကို ပြောင်းတို သေနတ် ၂လက်နဲ့ ပစ်ခတ်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအဆုံးစီရင်ခဲ့တယ်။ သေနတ်သမားဟာ ဗီယက်နမ်ကနေ ရွှေ့ပြောင်းရောက်ရှိလာတဲ့ တရုတ်လူမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ အလုပ်ထုတ်ခံရတာရယ်၊ အင်္ဂလိပ် စကားပြောပိုင်းဆိုင်ရာ အားနည်းမှုကြောင့် အနှိမ်ခံရတာက စတင်ခဲ့တာ ဖြစ်တယ်လို့ ရဲက ကောက်ချက်ချပါတယ်။
အိုဘားမားဟာ တူရကီမှာ တူရကီ ထိပ်တန်းအရာရှိများနဲ့ နှစ်နိုင်ငံကြား နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေးများဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ ဆွေးနွေးမယ်လို့ သိရပါတယ်။
စင်ကာပူ အသက်၁၆ နှစ်အောက် ယောကျာ်းလေးများနဲ့ လိင်ဆက်ဆံမှု ပြုရင် ထောင်ဒဏ် ၁၀ နှစ်အထိ ချမှတ်နိုင်ပါတယ်။ ဖေဖေါ်ဝါရီလက ပြစ်မှုထင်ရှားကြောင်း တွေ့ရှိရတဲ့ ကျောင်းဆရာမကို ၁၅ နှစ်အရွယ် ကျောင်းသားလေးနဲ့ လိင်ဆက်ဆံမှုကြောင့် ပြစ်ဒဏ်များ ချမှတ်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဂေးလမ်းနားက စားသောက်ဆိုင်တစ်ခုမှာ Rojak စားမိခဲ့သူထဲက အယောက်တစ်ရာကျော်လောက်ဟာ ၀မ်းဗိုက်ပိုင်းဆိုင်ရာ နာကျင်မှု ဝေဒနာများ၊ အော့အန်ခြင်း၊ မူးဝေခြင်း စတဲ့ ဝေဒနာများနဲ့ ဆေးရုံတင်ထားရပါတယ်။ အဲဒီထဲက ကိုမာ ဖြစ်သွားတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက် ဒီမနက်ကပဲ ဆုံးပါးသွားပါတယ်။ Food Poison ဖြစ်နိုင်ချေ ရှိတယ်လို့ သံသယ ဖြစ်နေကြပါတယ်။
မြောက်ကိုးရီယားဟာ အများက ၀ိုင်းဝန်း တားဆီးနေတဲ့ကြားကပဲ ဆက်သွယ်ရေး ဂြိုဟ်တု သယ်ဆောင်သွားတယ်လို့ အကြောင်းပြခဲ့တဲ့ ဒုံးပျံ ပစ်လွှတ်မှုကို တနင်္ဂနွေနေ့က ပစ်လွှတ်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ ဒုံးကျည်ပစ်လွှတ်မှုသည် ဆက်သွယ်ရေး ဂြိုဟ်တုကို ကမ္ဘာပတ်လမ်းကြောင်းထဲ ပို့ဆောင်နိုင်ဖို့ လို့ မြောက်ကိုးရီးယားက ပြောကြားခဲ့ပေမယ့် နိုင်ငံတစ်ကာက ယုံကြည်မှု မရှိခဲ့ပါဘူး။ ခု ပစ်လွှတ်လိုက်တဲ့ ဆက်သွယ်ရေး ဂြိုဟ်တုဟာ ကမ္ဘာပတ်လမ်းကြောင်းပေါ်ကို ရောက်ရှိသွားပြီး သတင်း အချက်အလက်များနဲ့ သမ္မတကင်မ်ကျုံအီးလ်ကို ချီးကျူးတဲ့ သီချင်းများ ထုတ်လွင့်နေတယ်လို့ မြောက်ကိုရီးယားက သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ တောင်ကိုရီးယားနဲ့ အမေရိကန် အစိုးရကတော့ စောင့်ကြည့်ထောက်လှမ်းချက်များအရ အောင်မြင်တဲ့ လွှတ်တင်မှု မဟုတ်ဘူး။ ဒုံးပျံ အလွတ်သာ ပါသွားပြီး ဂျပန်နိုင်ငံကို ဖြတ်ကျော်ကာ ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာထဲ ပျက်ကျသွားတယ်လို့ အစီရင်ခံပါတယ်။ တစ်ဆက်တည်းမှာပဲ ဂျပန်နိုင်ငံက ဒုံးပျံ အပိုင်းအစများ မိမိနိုင်ငံအပေါ် ကျလာမယ်ဆိုရင် ပစ်ခတ် ဖျက်ဆီးဖို့ တပ်လှန့်ခဲ့ပေမယ့် တစ်စုံတစ်ရာ ကျရောက်ခဲ့ခြင်း မရှိလို့ ပြောကြားပါတယ်။ မြောက်ကိုရိးယားကတော့ ဂျပန်သာ ပစ်ချခဲ့မယ်ဆိုရင် စစ်ကြေငြာတာ ဖြစ်တယ်လို့ ယူဆမှာ ဖြစ်ကြောင်း အစောပိုင်းကတည်းက ရာဇသံ ထုတ်ထားခဲ့ပါတယ်။ ပစ်လွတ်ချိန်မှာ ဂျပန်နိုင်ငံက ပြည်သူပြည်သားများဟာ ချယ်ရီပန်းများ စတင်ပွင့်တဲ့ ပွဲတော်ကို ဆင်နွဲနေကြတဲ့ အချိန် ဖြစ်ပါတယ်။ ကံကောင်းသွားတာကတော့ အပျက်အစီး အစိတ်အပိုင်းများ ကျရောက်ခဲ့ခြင်း မရှိပါဘူး။ အမေရိကန်နဲ့ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကတော့ အဆိုပါ လုပ်ရပ်ကို မိုက်ရူးရဲဆန်တဲ့ လုပ်ရပ်လို့ ကြေငြာလိုက်ပြီး နောက်နောင် မပြုရန် အပြင်းအထန် သတိပေးလိုက်ပါတယ်။ တစ်ဆက်တည်းမှာပဲ လုံခြုံရေး ကောင်စီမှာ ဒီအရေးကို အပြင်းအထန် ဆွေးနွေးခဲ့ပေမယ့် သဘောတူညီချက် တစ်စုံတစ်ရာ မရရှိခဲ့ပဲ လိပ်ခဲတည်းလည်းနဲ့ ပြီးသွားပါတယ်။ မြောက်ကိုးရီးယားနိုင်ငံရဲ့ မဟာမိတ်နိုင်ငံ ဖြစ်တဲ့ ရုရှားနဲ့ တရုတ်နှစ်နိုင်ငံဟာ လုံခြုံရေး ကောင်စီထဲက ကြီးငါးကြီးမှာ အပါအ၀င် ဖြစ်တဲ့အတွက် ပြင်းထန်တဲ့ အရေးယူမှုများကို နှစ်နိုင်ငံစလုံးက ဗီတိုအာဏာနဲ့ ပယ်ချနိုင်ပါတယ်...။
ထပ်ဖြည့် - (April 07, '09, 3:33 pm SG standard time)
စင်ကာပူက Rojak စားမိပြီး ပထမဦးဆုံး ဆုံးပါးသွားသူက ကင်တင်းကို Operate လုပ်နေတဲ့ Operator ဖြစ်ပါတယ်။
အီတလီက ငလျင်ကြောင့် သေဆုံးသူ ဦးရေ 179 ယောက် ကျော်သွားပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒဏ်ရာရသူ စုစုပေါင်း ၁,၅၀၀ ကျော်သွားပါပြီ။ (နှစ် ၃၀ အတွင်း အဆိုးရွားဆုံးသော ငလျင် လှုပ်မှု ဖြစ်ပါတယ်။)
ရေးသားသူ Ko Boyz at 5:41 PM 13 ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
မိုးတွေကလဲ တစ်ဂျိန်းဂျိန်းနဲ့ အညိုးတစ်ကြီး ဆိုသလို ရွာနေတာ...။
ရေတွေ အပေါ်ကနေ သွန်ချနေသလား ထင်ရအောင် ဒလဟော ကျနေတာဆို.. မိုးရွာနေတာနဲ့ မတူတော့ပဲ တာကျိုးနေတဲ့ ပုံနဲ့တောင် တူနေသေး...။
ဆိုတော့ အိမ်ထဲမှာပဲ နေနေတာ...။ ပြတင်းပေါက်ကို မိုးစက်တွေ မတရား ၀င်လာမှ ပိတ်လိုက်တယ်။
ပိတ်တုန်းက မလုံလို့ ထင်ပါ့။ မှန်ပြတင်းနှစ်ခုကြားထဲ လေတွေ တိုးသံက မသိရင်ပဲ သရဲကားထဲက လေတိုးသံလိုလို... စစ်ကားထဲက မိုင်းနင်းမိခါနီး စစ်သားတစ်ယောက် နားထဲ ကြားနေတဲ့ လေတိုးသံလိုလို၊ သားကောင်ကို ပစ်တော့မယ့်ဆဲဆဲ ချိန်ထားတဲ့ မြားတံကို ဖြတ်ပွတ်သွားတဲ့ လေတိုးသံ လိုလို ထင်မိတယ်...။ တစ်ကယ်က ကျွန်တော့် အိပ်ရာပြတင်းမှန်ကြားထဲကို ဖြတ်တိုးဝင်လာတဲ့ တစ်ဟဲဟဲနဲ့ မြည်နေတဲ့ လေသံပါ။
ပင်လယ်ထဲမှာ ဒီလို မိုးရွာပုံမျိုးနဲ့ဆိုရင်တော့ သဘောင်္ငယ်များ၊ ငါးဖမ်း လှေငယ်များကတော့ ဟိုလူး ဒီလာ၊ ဘယ်ညာ ယိမ်းငင်နေမှာပါ့။
ကိုတံငါများတော့ ဘယ်လို နေရှာမလဲတော့ မသိ...။
တစ်ခါသားမယ် အဲဒီလို ရာသီဥတု ဆိုးဝါးပြင်းထန်နေချိန်မှာ သင်္ဘောငယ် တစ်စင်းရဲ့ ၀မ်းဗိုက်ထဲမှာ ရောက်နေခဲ့ဖူးတယ်။ ထမင်းစားခန်းထဲကိုတောင် တည့်တည့်မတ်မတ် သွားနိုင်ဖို့ အနိုင်နိုင် ကြိုးစားရတဲ့ တစ်ခဏ...။ ဗြုန်းဆို ကုန်းပတ်ပေါ်ကို တက်တဲ့ လှေကားနားက တံခါးက ရုတ်ချည်း ပွင့်သွားလေတော့ လေတိုးသံတွေ နားထဲ ဆောင့်ဝင်လာတာ...။ တစ်ဟဲဟဲနဲ့...။
နောက်တစ်ခါကျတော့ တောင်ကြီးကနေ မန္တလေးကို ကားနဲ့ ဆင်းသွားတဲ့ အခေါက်။ မိုးရာသီ...
လေတွေ မတရားတိုက်လွန်းလို့ ကားဘေးနားက မိုးကာတွေ အကုန်ချပြီး မောင်းနေတာ။ နောက်ဆုံး မိုးကို အန်တုဖက်ပြိုင်ခြင်းငှာ မစွမ်းသာတော့တဲ့ ကိုရွှေဒရိုင်ဘာခမျာ လမ်းဘေး ကားထိုးရပ်နေရရှာတော့တယ်။ မိုးကာ အလုံပိတ်ထားတော့ လူကမွန်းကျပ်။ လူ့ချွေးစော်တွေနဲ့ မူးဝေ... ဖလန်းကနဲ လေတိုးလိုက်တော့ မိုးကာ လှန်သွားတယ်...။ လားလား.. လေတိုက်သံက တော်လဲ မြည်သလိုပဲ... (၀မ်းတွင်း မရောက်ခင် နေရာမှာ...)
အဲ..ပြောရပြန်ရင် ... နောက်တစ်ခေါက်က လေယာဉ်နဲ့ဗျ...။ မိုးရွာတော့ လေယာဉ်က အထိန်းအကွပ်မဲ့သလို ဖြစ်နေရော...။ Air pocket ဆိုလား... Turbulence ဆိုလား.. အဲဒါနဲ့ မိတော့ လေယာဉ်က အပေါ်အောက် ပြုတ်ကျလိုက် ငြိမ့်ကနဲ တက်သွားလိုက်နဲ့... ရန်ကုန်လေဆိပ်ကို မဆင်းနိုင်တော့ပဲ ပဲခူးလေဆိပ်မှာ ၀ဲနေရတယ်...။ ၂ နာရီလောက်ကြာအောင်ကို လေယာဉ်ပေါ်မှာ ဆန်ပြုတ်ရောင်းလိုက်ရတယ်...။
သဘာဝကို အန်မတုနိုင်တဲ့ လူသားများထဲက တစ်ယောက်အနေနဲ့ ဆိုးရွားတဲ့ ရာသီဥတုကို ကြုံမိတဲ့ အခိုက် ခံစားမိတာလေး ချရေးပေးလိုက်ရပါတယ်။
(မိုးနဲ့ ပါတ်သက်လို့ တစ်ပို့စ်တော့ တင်ဖြစ်အောင် တင်ပါဆိုလို့ ဆိုလာသူ တစ်ယောက်အတွက်...။)
(မရေးတတ် ရေးတတ်နဲ့မို့လို့ ရေးလိုက်တယ်...။ အကျိုး မဖြစ်ပေမယ့် အဆိပ်အတောက်တော့ မဖြစ်လောက်ဘူး ထင်ပါတယ်။)
ရေးသားသူ Ko Boyz at 1:19 AM7ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
အကြင်သူသည် အကြင်သူအား သနားသက်ညှာသောအားဖြင့် အကြောင်းခြင်းရာ တစ်ရပ်ကို ဖွင့်ဟပြောဆို၏။
အဆိုပါ အကြောင်းခြင်းရာသည် အချိန်အတိုင်းအတာ တစ်ခုထိ လျို့ဝှက်အပ်သော အမှု ဖြစ်ချေရာ သတ်မှတ်ထားသည့် အချိန်မတိုင်မချင်း ပေါက်ကြားမှု မဖြစ်စေရန် လျို့ဝှက်ချက်ကို ထိန်းသိမ်းထားရာ၏။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 3:58 AM 13 ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
ပတ်ကြားအက်နေတဲ့ မြေသားတွေ ရှိတယ်...။
တံလျပ်တွေကတော့ ဟိုးအဝေးမှာ တစ်ရှိန်ရှိန်ထလို့...။
တောင်ခိုးတွေ ဝေနေတဲ့ ဟိုအဝေးမှာတော့
နံရံတွေ အက်ကြောင်းလိုက်နေတဲ့ တိုက်အိုတွေရှိတယ်...။
မီးခိုးတွေ တစ်လူလူ ထွက်လို့...။
နာကျည်းကြေကွဲခြင်းတွေနဲ့ အက်ကွဲနေတဲ့ ရင်ဘတ် အစုံမှာ
ဒဏ်ရာရနေတဲ့ နှလုံးသား တစ်ခု ရှိတယ်...။.
ဟိုးအဝေးက လင်းဖျဖျ ရောင်စဉ်မှာ
လှမ်းလာမယ့် လက်အစုံကို တွေ့မိလေသလား....။
ဒီလိုနဲ့ အေးရက်စ်ဟာ အက်ဖရိုသိုက် နတ်ဘုရားမအောက်မှာ
အချစ်အတွက်နဲ့ အခါခါ ကျရှုံးခဲ့ပေါ့...။
ဒီမောင်မှာတော့ ဆားငန်ရည်သောက်လို့ ကောင်းတုန်း...။
Ares = Aphrodite ၏ ချစ်သူ။
Aphrodite = ဗီးနပ်စ်လို့လဲ သူ့ကို သိတယ်...။ အေးရက်စ်နဲ့ ချစ်ကျွမ်းဝင်မိတဲ့ အလှနတ်သမီး။ မြားနတ်မောင် ကျူးပစ်ရဲ့ အမေ။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 12:14 AM 14 ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
မြန်မာပြည်ကို ဈေးနှုန်းသက်သာစွာနဲ့ ခေါ်ဆိုရအောင်။
ပြည်ပရောက် မြန်မာလူငယ်များမှ တည်ထောင်ထားတဲ့ ဖုန်း ၀န်ဆောင်မှု ကုမ္ပဏီ ဖြစ်ပါတယ်။
လုပ်ငန်း စတည်ထောင်တဲ့ အထိမ်းအမှတ် အနေနဲ့ ပထမဦးဆုံး ၀င်ရောက် မှတ်ပုံတင်သူ အယောက် ၁၀၀ ကိုသာ မြန်မာပြည်ကို အခမဲ့ ခေါ်ဆိုခွင့် ၅ မိနစ် စီပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လောလောဆယ်တော့ ခရဒ်ဒ်ဒစ်ကဒ် မလိုပါ။
စိတ်ကျေနပ်လို့ ၀န်ဆောင်မှုကို သုံးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ စင်ကာပူက စတားဟဘ်နဲ့ ပါတနာ လုပ်ထားတဲ့ ဆိုင်တွေမှာ တော့ပ်အပ်ပ် ကဒ်တွေ ၀ယ်လို့ရပါတယ်တဲ့...။
နောက်ကို တစ်ခြားနိုင်ငံတွေကပါ သုံးနိုင်အောင် PayPal စံနစ်နဲ့ ရောင်းချပေးမှာ လို့ ဆိုပါတယ်...။
င်္Free Call to Myanmar, Register here
(စာကြွင်း။ ။ ကြော်ငြာခ မရပါ။ အသိပေးရုံသက်သက်ပါ။ Use at your own risk.)
ရေးသားသူ Ko Boyz at 3:41 PM7ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
Labels: fool, Miscellaneous